….ရာသီပေါ် .. .. ရောဂါ ( စိတ် )..ရောင်းတမ်း …. ( sharon ) | PoemsCorner
….ရာသီပေါ် .. .. ရောဂါ ( စိတ် )..ရောင်းတမ်း …. ( sharon )
၀င် ပါ .. ၀င် ခဲ့ 
မိတ် ဆက် ( မွေးဖွား )
ရွေး ချယ် …
အန် ချ စိတ် အနာ
ကဗျာ …. လား
စတင် လိုက် တာ နဲ့.. သွေးကြော ချည် (ဖြတ်) ခံလိုက်ရတယ်
နာ့ဗ် ကြောတွေ ထုံကျင်
စိတ် .. စွမ်းရည် ကျ
အယ်(လ်) ကိုဟော ….
နာတယ် .. (နာအောင်ပဲပြန်ပြန်ဆွမိ ) ဒီအနာ
စိတ် အမြှေးပါးတွေ .ပါးပါးလျ
တို့ ထိရုံ နဲ့ပျက်ပျက် ကျ တယ်
ထွေး လိုက် … ၀ါးလိုက်… ထွေး လိုက်
တစိတ်တဒေသ … ကနဦးရုပ်လွှာ ..
အမောတကော အိုစာ …
သူ (ခင်ဗျား) ကောင်းကောင်းတတ်မြောက် ထား တယ် ( ထင်)
လူ့ အကြောင်း သိချင်လား
ဘ၀ တစ်ခုခု ကို နားလည် ချင်လားး
ဆန္ဒ တွေ ကို မြင်ချင်လား
စာနာမှု ကို သင်ယူချင်လား
ရင်ခွဲ ရုံ နံ့ များများ ရှူ ကြည့်
အဟက် … ဘ၀ ဆို တာ ကို ခင်ဗျား သိလာလိမ့်မယ်
…… သေဆုံးခြင်း က မွေးဖွားခြင်းနဲ့ထပ်တူ ကျ ၇ဲ့ လား ……
…… တစ်ခုခုရချင်တယ် မလားး
တစ်ခုခု ပေးလိုက်ပေါ့ …….
ပြီး … မှ
နှ လုံး သား .. တဲ့ 
….. ထုံး စံ ကို ဖြစ် လို့…..
sharon ( 5:17 pm )
In: ကဗျာ Posted By: sharon myorr myor Date: Apr 23, 2012
အံ့သြစရာပဲ ခင်ဗျားရဲ့ ပျက်ယွင်းမှု့တွေက သိပ်မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ ရောဂါဆန်းတစ်ခုလိုပဲ
…. အဲဒီညက..နံရိုးမလေး…အဲဒီ ( အချစ်) မှာ နိဒါန်းပျိုးခဲ့ ရတယ် …… ( sharon )
Leave comment5Comments & 406 views
ကဗျာကို တော်တော် ကြိုက်ိမိတယ်ဗျာ…
By: zawthetoo at Apr 23, 2012
Lyrics ကဗျာကနေ မလွတ်မြောက်သေးဘူးဗျ
ငါဗဟိုပြုတာကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ ပြောင်းလဲချင်ရင်တော့ ပင်ပန်းမှာပါပဲ
ရင်ခွဲ ရုံ နံ့ များများ ရှူ ကြည့်(အဲ့နားတွေမှာလိုင်းတွေကိုအတင်းကြီးဆွဲထည့်ထားတယ်)
ပီးတော့ တစ်ခုခု (တခုခုမဟုတ်)
သင်ယူပါ အရေးအသားက ဗဟိုပြုလိုတဲ့ပုံက ဘာသာစကားကို အခြေပြုမယ် ပီးရင် ကော်လာဂ်ျ့ပုံတွေ လက်ရဲဇက်ရဲသုံးမယ်သဘောပါပဲ ကြိုးစားပါ အမျိုးသမီးကဗျာဆရာတွေထဲကမှ ခံစားမှုကဗျာဆရာမတွေထဲမှာ ခင်ဗျားနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ တည်ဆောက်မှုကဗျာတွေရေးမယ်ဆိုရင်တော့ လေ့လာပါရှရွန်
(သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ လူနို+)
By: လူနို at Apr 24, 2012
ကျနော့် ကို အခု လို အကြံ ပေးတာာ တကယ် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ..
ကျနော် က ကဗျာနဲ့ ပက်သက်လာရင် နကန်းတစ်လုံးတောင် နားလည်တာမဟုတ်ဘူးဗျ
( ခံစားရသလိုချရေးမိတာ )
လေ့လာမှု အားနည်းတာတော့ အမှန်ပဲဗျာ .. ( ဘယ်လိုလေ့လာရမယ် နဲ့ရီဇိုးဇစ် ဘယ်လိုရနိုင်တယ် ဆိုတာ မသိတာလဲပါပါတယ် )
နောက်တစ်ခု က ကျနော် ကတိုင်းရင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေတော့ ဘာသာစကား ( စကားလုံးကြွယ် ၀မှု အားနည်းလွန်းတယ် )
အကြံညဏ်တွေ ပေးပါ .. သင်ပြပေးပါ
ကျနော် ဟာ ကဗျာ ကို မြတ်နိုးပါတယ်
ထို့ အတူဘာမှ မသိသေးသော ဘာမျ ချ မရေး ရသေးသော စာ၇ွက်ဖြူပါ
လိုသလို ပုံသွင်း ပညာပေးကြပါလို့ 
ကျနော့် ကဗျာ ကို အမြဲတမ်းဖတ်ပေးတဲ့ အကြံပေးတဲ့ 
ဆရာများ သူငယ်ချင်းများ ရေးဖော်ရေးဖက်များ အားလုံး ကို လည်း ဒီနေရာ ကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်
ကျနော့် ရဲ့ မိတ်ဆွေ ( ခင်ဗျားအဆိုအရ ) လူနို+ ကို လေးစားကျေးဇူးတင်လျှက်
p.s >> “…… တခုခုရချင်တယ် မလားး
တခုခု ပေးလိုက်ပေါ့ ……. ”
စာလုံး ပေါင်းအမှား ကို ပြင်လိုက်ပါ့မယ်
” …… တစ်ခုခုရချင်တယ် မလားး
တစ်ခုခုပေးလိုက်ပေါ့ ……. ”
ကဗျာ ကို ဖတ်ပေးတာရော
By: sharon myorr myor at Apr 24, 2012
အင်း ခင်ဗျားတိုင်းရင်းသူဆိုတာလည်း ကျွန်တော်သိပါတယ်
ခင်ဗျား ဘာသာစကားမကြွယ်ဘူးဆိုတာတော့ မနှိမ့်ချပါနဲ့လို့ပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ခင်ဗျားနဲ့ကောင်းကောင်းသိသူတစ်ယောက်ပါ ခင်ဗျား ဘာသာစကား အဲ့လောက်အားမနည်းပါဘူး အထူးသဖြင့် ကဗျာဓါတ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာ စိုင်းဝင်းမြင့်(ကျွန်တော့်အမြင်ပါ)ကို လက်ဆွဲထားသူတစ်ယောက်ဟာ အဲ့လောက်ညံသူမဟုတ်ပါဘူး ပီးတော့ ခင်ဗျားကခံစားမှုအမှီလိုက်နိုင်တဲ့ကဗျာဆရာမတစ်ယောက်ပါ ကျွန်တော်ကအကြံပေးယုံသက်သက်ပါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး အထူးသဖြင့်ဆရာလုပ်တယ်လို့ ထင်မှာဆိုးလို့ပါ တော်လေပြီ(လူနို+)
အကြံပေးခံရခြင်း ကို ကျနော် ဂုဏ် ယူပါတယ်
By: sharon myorr myor at May 5, 2012